This entry was posted on Tuesday, August 12, 2008 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
ငွေတန်ဘိုးလေးရေးသွားတာ တော်တော် ကောင်းတာပဲ။
စားစရာမရှိလို့ ဆားသွားတောင်းတာ သွားတိုက်ဆေးဘူးပေးလိုက်တယ်ပြောလို့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ရှိနေတုန်းသာ မသိသာပေမဲ့
တစ်ကယ်မရှိတဲ့ အချိန်ကျ ဆားလေးတောင် ရဖို့ မလွယ်